Konkola’attota gargaarsaa namoomaa fe’anii Tigraayiin seenan keessa caalaan isaanii waan hin deebineef rakkinnii gargaarsaa fe’uu akka isa muudate dhaabanni midhaan nyaataa adduunyaa ibsuu isaa AFP gabaaseeraa.
Akka dubbii himaan WFP Geemmaa Snoowdon jedhanitti Adoolessa 12 konkola’attoota Tigraayiin seenab 445 keessa kan deebi’an 38 qofa.
Konkola’attoni sun bakka isaan jiraaniif maal ojjachaa akka jiraan akka hin beekne kan ibsee dhaabanni midhaan nyaata adduunyaa , namoottan haalaa beelaa keessa jiran 400 000 fi gargaarsa qaqqabsiisuudhaaf akka rakkate ibseera.
Dhimma kana irratti deebiin karaa toora tiwuuteraa mootummaa Itiyoophiyaatiin bahe, HIWAHAT konkola’attota sana qabee dhimmaa isaatiif itti fayyadamaa jira shakkiin akka jiru ibsa.
Dubbi himaan Adda Bilisummaa Ummata Tigraay Getachoo Raddaa, gargaarsaa namoomaa irraatti kan rakkina uumaa jiru mootumma Itiyoophiyati malee haanga’otaa Tigraayi wajjin wantii waltti dhufu akka hin jirre himaniiru.